N'elu isi Manufacturers - China n'elu isi Suppliers & Factory
Ọkọlọtọ isi ụlọ ntu, ma ọ bụ kpọọ ọkọlọtọ Marquee, Sistemu Billboard Banner nke emebere nke ọma iji tinye n'ụlọikwuu Na mgbakwunye ohere iji gbasaa ozi gị wee mee ka ị pụta ìhè ngwa ngwa na ihe ngosi okporo ụzọ ma ọ bụ ihe ngosi ahia. Enwere ike ịhụ ụlọ ntu gị site n'ebe dị anya na-ewetara gị nlebara anya dị ukwuu.
Obere ọkọlọtọ Backdrop Tebụl na-adị mfe ikpokọta, enwere ụzọ dị iche iche isi jiri ọkọlọtọ okpokoro a dị n'elu. Iji tinye ya n'elu tebụl ngosi maka ngwaahịa gị ma ọ bụ ihe ngosi; dị ka ndabere iji gosi na tebụl.
Dị maka tebụl 4ft, 6ft na 8ft
Ị nwere nsogbu ịpụta na ihe ngosi ụgbọ ala? Nwaa n'elu ọkọlọtọ ụgbọ ala. Enwere ike ịhụ ụgbọ ala gị site n'ebe dị anya ma na-adọta ọtụtụ anya. Nke a bụ ụzọ dị mfe & magburu onwe ya isi pụta ìhè otu ụgbọ ala ma ọ bụ ụlọ ngosi ngosi na ihe ngosi ahia n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí (Ejila ya na ọnọdụ ikuku)